सांस्कृतिक रूपान्तरण समाजको सापेक्षतामा हुन्छ। यो विशाल पक्ष हो। यसका धेरै आयाम छन्। धर्म र संस्कृतिका कुरा अनन्त छन्। यो शास्त्र हो। यसले कतिकति क्षेत्र ओगट्ने हो, कहाँ जाने हो, सबैले ध्यान दिनुपर्छ नत्र यो हराउने क्षेत्र हो। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, इसाईलगायत संस्कृतिका कुरा छन्।
साम्राज्यवादी, सामन्तवादी साथै अहिले संशोधनवादी संस्कृति पनि आएको छ। द्वैधवादी संस्कृति पनि आएको छ। द्वैधवादी संस्कृति पनि खतरनाक छ। यसलाई पुँजीवादी संस्कृति भनिन्छ। तर, यो पनि सबैमा छ। रूपान्तरण हुनुपर्छ सबैले भन्ने तर रूपान्तरण पनि नहुने सांस्कृतिक द्वैधवाद हो। संकटको बेलामा यो आउँछ। यो संकटग्रस्त पूँजीवादको उपज हो।
कम्युनिस्ट भनिनेहरूमा पनि सांस्कृतिक द्वैधवाद देखापरेको छ। यसका विरुद्ध हामीले सशक्त संघर्ष गर्नु जरुरी छ। हामीले समाजलाई बुझ्ने मात्र होइन, बदल्ने पनि हो। त्यसकारण विकल्प के हो त, यो कुरा आएको छ। यसलाई बहसमा लैजानुपर्छ। विगतमा हामीले दसैंतिहार मनाइयो। धर्म मानेर मात्रै दशैं तिहार मनाइएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। १५ दिन बिदा दिन्छ। भेटघाट गर्नु छ। गाउँघरमा गएपछि सामाजिक कुरा हुन्छ। थुप्रैथुप्रै कुराहरू हुन्छन्।
तिहार पनि मनाउने गरिएको छ। त्यो धर्म मानेर मात्र मनाइएको होइन। प्रमुख त राज्यसत्ता हो। सत्ताले पुरानो संस्कृतिको आडमा स्वार्थसिद्ध गर्ने काम गर्छ र पुरानो तरिकाले दसैं मनाउँछ। यही नयाँ सत्ता आउने हो भने शहिद दिवस मनाइन्छ। दसैं भनेको कुरूप पक्षमाथिको विजय हो। हामीले पनि देशका लागि बलिदान भएका सहिदको सम्झनामा मनाउने हो। १५ दिनको दसैंको सट्टामा बरु ७ दिनको सहिद दिवस मनाउँला। कसरी हुन्छ, विकल्प दिन जरुरी हुन्छ।
परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको विकल्प यो हो भनेर हामीले हरेक क्षेत्रमा जानुपर्छ। सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा गर्दा मुख्य दुईवटा पक्ष छन्, कम्युनिस्टहरूकै रूपान्तरण हो, अरूको आशा राखेर हुँदैन। यो रूपान्तरण दुई किसिमको हुन्छ।
१. एउटा कम्युनिस्टहरूको रूपान्तरण।
२. अर्को जनताको स्तरसम्मको रूपान्तरण।
मलाई संस्कृतिमा बल प्रयोग हुनुपर्छजस्तो लाग्दैन। लेनिन र माओले ठाउँ-ठाउँमा यो कुरा गर्नुभएको छ। लेनिनले धर्मबारे यान्त्रिक भौतिकवादी हुनु हुँदैन भन्नुभएको छ। परिस्थितिअनुसार कतै बल प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। तर आम रूपमा होइन। राजनीतिक आन्दोलन सँगसँगै सांस्कृतिक आन्दोलनलाई पनि व्यवस्थित बनाएर लग्नुपर्छ।
-मोहन वैद्य ‘चैतन्य’ (वरिष्ठ मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तक)